Dalet သည် DPP / AMWA အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကို Dalet AmberFin Transcoding Platform ဖြင့်ပထမဆုံးထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Dalet Dalet AmberFin Transcoding ပလက်ဖောင်းနှင့်အတူပီပီ / AMWA လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးရယူနိုင်သောဖို့ပထမဦးစွာထုတ်လုပ်သူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်
BT အားကစားရဲ့စက်ရုံ-ကျယ်ပြန့် AS-2014 ဖိုင်-based လုပ်ငန်းအသွားအလာ၏ဒီဇိုင်းနှင့်ဖြန့်ကျက်မှုအတွက် IBC11 မှာဂုဏ်ပြု Dalet
ပဲရစ်, ပြင်သစ် - စက်တင်ဘာလ 30, 2014 - Dalet ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာစနစ်များပီပီ / AMWA အသိမှတ်ပြုလက်မှတ်ကိုလက်ခံရရှိ -, မီဒီယာအဖွဲ့အစည်းများအဘို့အ software ကို-based ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဦးဆောင်ပေးသူ, စက်တင်ဘာလ 13, 2014 ပေါ်ကုမ္ပဏီ၏ထုတ်ကုန် (Transcoder AmberFin ပလက်ဖောင်း) ရှိသည်ဖို့ကမ္ဘာပေါ်မှာပထမဦးဆုံးထုတ်လုပ်သူတစ်ဦးအကြားခဲ့ကြောင်းကြေညာခဲ့သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, Dalet အဆိုပါ 2014 လန်ဒန်အိုလံပစ်တွင်တည်ရှိသည်ဖြစ်သော BT အားကစားရဲ့အသစ်, ဖိုင်-based ထုတ်လုပ်မှုစင်တာက၎င်း၏ဒီဇိုင်းနှင့်ဖြန့်ကျက်မှုအတွက်ဂုဏ်သိက္ခာ IBC2012 ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဆုကိုယှဉ်ပြိုင်မှာ, BT အားကစားနှင့် Timeline ကိုရုပ်မြင်သံကြားနှင့်အတူတစ်ဗိုလ်လုပွဲအမည်ရှိ ပန်းခြံ။ 2013 ၏သြဂုတ်လအတွင်းဖြန့်ချိခဲ့သည့်အဆိုပါ State-Of-The-Art စက်ရုံ, BT အားကစားအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးအားလုံးအကြောင်းအရာများအတွက်အချက်အချာဖြစ်ပါတယ်။ အသစ်ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံရမှတ်ပထမတစ်အရေအတွက်ကို - BT အားကစား၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ပြည်တွင်းရေးညျဘဏ်ဍာအားလုံးနှင့်ပြင်ပမှအကြောင်းအရာအပ်ဒစ်ဂျစ်တယ်ထုတ်လုပ်မှုမိတ်ဖက် (ပီပီ) ဖိုင်-based ပေးပို့သတ်မှတ်ချက်များချမှတ်ရန်ပထမဦးဆုံးဗြိတိန်ထုတ်လွှင့်ဖြစ်လာသည်မနိမ့်ဆုံး။ Timeline ကိုရုပ်မြင်သံကြား Dalet AmberFin နှင့်အတူနီးကပ်စွာအလုပ်လုပ်ခဲ့စဉ် BT အားကစား, စီမံကိန်း၏မဟာဗျူဟာဦးတည်ချက်ကဦးဆောင် - ထိုပီပီပဏာမခြေလှမ်းနှင့် AS-11 ပီပီဖိုင်တွေရဲ့ဖန်တီးမှုများအတွက်ထောက်ခံမှုများပါဝင်သည်ထားတဲ့ထုတ်ကုန်များနှင့်စနစ်များကိုတစ်ဦးခေတ်မီဆန်းပြားမိသားစုကိုပြုစုသူတစ်ဦးထောက်ခံသူ။
"Dalet စက်မှုလုပ်ငန်းစံချိန်စံညွှန်းများဖြတ်တောက်ခြင်းအစွန်းပေါ်မှာတည်းခိုရန်ကျူးလွန်, နှင့် IBC ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဆုပေးပွဲဆန်ခါတင်ခံရကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကြောင့်ကောင်းစွာရကျိုးနပ်ခဲ့ထေူဖြစ်ပါတယ်။ "BT အားကစားတစ်ခုမကြာမီကျယ်ပြန့်လက်ခံကျင့်သုံးရမည်စံပီပီအပေါ်အခြေခံပြီးတစ်စက်ရုံဆောက်လုပ်ဖို့စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားခဲ့ပါတယ်, ငါတို့သည်စိန်ခေါ်မှုအပေါ်ယူဖို့အခွင့်အလမ်းရှိခဲ့ပါပြီမှပျော်ရွှင်နေ ဘင် Davenp သို့မဟုတ် t, စျေးကွက်, Dalet ၏ညွှန်ကြားရေးမှူး comments ။ "မီဒီယာကိုကိုင်တွယ်, ဒါပေမယ့်လည်း metadata ဖို့မသာအလုံအလောက်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်မယ့်တစ်ဦးမီဒီယာအပြောင်းအလဲနဲ့ပလက်ဖောင်းရှိသည်ဖို့စွမ်းရည်, ကြီးမားသည်။ ငါသူတို့ကဒီဆုချီးမြှင့်မှုအတွက်အသိအမှတ်ပြုခံရကစားကြီးမားသောအခန်းကဏ္ဍများအတွက် BT အားကစားနှင့် Timeline ကိုရုပ်မြင်သံကြားမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်ကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်။"
အဆိုပါ Dalet AmberFin ပလက်ဖောင်း BT အားကစား high-speed ကိုဖိုင်ကိုပြန်ဖွင့်ခြင်းနှင့် transcoding အရင်းအမြစ်များကိုအဖြစ်ဖိုင်-based ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ပလေးအောက်ကိုစက်ရုံအတွင်းပြီးပြည့်စုံသောစံချိန်စံညွှန်းများပြောင်းလဲခြင်းစွမ်းရည်ပေးပါသည်။ Dalet ရဲ့ Unified အရည်အသွေးထိန်းချုပ်ရေးစနစ်၏ထို့အပြင်မြင့်မားတဲ့မီဒီယာဖိုင်ရဲ့အရည်အသွေးနှင့်လုပ်ငန်းအသွားအလာအတွင်းပစ္စည်းလျင်မြန်စွာ turnaround သေချာ။
ပီပီ / AMWA လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေး
ယင်း၏ဖိုင်ပို့ဆောင်မှုအလုပ်၏အစိတ်အပိုင်းအဖြစ်, ထိုပီပီထုတ်ကုန်များ၏အရေအတွက်အောင်မြင်စွာပီပီရဲ့လေးစားလိုက်နာခြင်းအစီအစဉ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်စမ်းသပ်ပြီးစီးခဲ့ပြီဟုကြေညာခဲ့သည်နှင့်ပြီးသား AMWA လက်မှတ်အောင်မြင်ပါပြီ။
အဆိုပါပီပီထုတ်လုပ်သူဟာပီပီရဲ့စံဆန့်ကျင်ပြင်ပအာမခံချက်စစ်ဆေးမှုများမှတဆင့်၎င်းတို့၏ထုတ်ကုန်ထားရန်အခွင့်အလမ်းပေးမည့်ထုတ်ကုန်စမ်းသပ်ခြင်းနှင့်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်တွေအတွက်ခိုင်မာတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုဖန်တီးဖို့ Advanced မီဒီယာလုပ်ငန်းအသွားအလာအသင်း (AMWA) နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့ဖြစ်ပါတယ်နှင့်စားသုံးသူထားတဲ့ထုတ်ကုန်ဖော်ထုတ်ရန်ကူညီပေးပါမည် လွတ်လပ်စွာအကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်။
အဘယ်သူ၏ထုတ်ကုန်စံတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးပြီဖြစ်ကြောင်းကုမ္ပဏီများမှ၏ပထမဦးဆုံး tranche Telestreamလာမည့်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းလက်မှတ်အောင်မြင်ရန်မျှော်လင့်ထားသည့်နောက်ထပ်ကုမ္ပဏီများသည် '' ထုတ်ကုန်အတူ Root6နည်းပညာ, Cinegy နှင့် Dalet ။
ကီဗင် Burrow, ပီပီနည်းပညာဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းကိုပို့ဆောငျနှင့် CTO အသံလွှင့် & ဖြန့်ဖြူး Channel ကို 4, "ဟုပြောသည်အဆိုပါအစီအစဉ်တွင်စက်မှုလုပ်ငန်းကနေတစ်ဦးအလွန်အပြုသဘောဆောင်တဲ့တုံ့ပြန်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါကကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်အများကြီးထုတ်ကုန်လာမယ့်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းအသိအမှတ်ပြုခံရဖို့မျှော်လင့်နေကြပါတယ်ထုတ်လုပ်သူ '' စိတ်အားထက်သန်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုဖို့ပီပီရဲ့စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အကျေးဇူးတင်စကား၏တန်ဖိုးများစွာသောထောက်ခံချက်ဖြစ်ပါသည်။ "
AMWA ရဲ့ဘရတ် Gilmer "ကဆက်ပြောသည်အဆိုပါ AMWA ဤအရေးကြီးသောစီမံကိန်းကိုအပေါ်ပီပီနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ကျေနပ်သည်။ ကျနော်တို့ကိုသူတို့ Workflows-based file ပြောင်းရွှေ့အဖြစ်ခြေလှမ်းများဟာပီပီအဆုံး-အသုံးပြုသူများက '' ယုံကြည်စိတ်ချမှုတိုးမြှင့်ဖို့အတူတူတစ်ဦးကိုတိကျခိုင်မာစွာနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်, လွတ်လပ်သောစမ်းသပ်ခြင်းများနှင့်လက်မှတ်အပါအဝင်, နေရာအားလုံးကိုအလုပ်သွင်းထားပြီယုံကြည်။ "
ဒစ်ဂျစ်တယ်ထုတ်လုပ်မှုမိတ်ဖက်က Sky, Channel ကို 4, S5 A / C, UKTV နှင့် BT အားကစားကနေကိုယ်စားပြုမှုနှင့်အတူဘီဘီစီ, ITV နှင့် Channel ကို4နေဖြင့်ငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်ဦးဆောင်သည့် non-profit မိတ်ဖက်ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ IBC2014 ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဆုပေးပွဲအကြောင်း
IBC ကမ္ဘာကြီးဟာအီလက်ထရောနစ်မီဒီယာနှင့်ဖျော်ဖြေရေးစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်. အသိပညာဝေမျှဖို့ကြွလာရသောမှာအဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ IBC ဆုပေးပွဲ၏အခန်းကဏ္ဍကိုအကောင်းဆုံးဖန်တီးမှုနှင့်ပူးပေါင်းဆန္ဒပြသည့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်အဖွဲ့အစည်းများဆင်နွှဲရန်ဖြစ်ပါသည်။ သူတို့က IBC စဉ်အတွင်းတစ်သွက်နှင့်အစာရှောင်ခြင်း-ရွေ့လျားအခမ်းအနားများတွင်တင်ဆက်ထားပါသည်။ အဆိုပါအခမ်းအနားကိုလည်းတစ်နှစ်မှအများဆုံးစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်များနှင့်လှုံ့ဆော်အကြောင်းအရာအချို့ကိုတင်ဆက်ပေးတယ်နှင့် IBC အနုပညာဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်ရှင်ရုံတစ်ပြည်နယ်သို့ပြောင်းပေးသည့် RAI ရဲ့ဇာတ်ရုံထဲမှာတည်ခင်းဧည်ဖြစ်ပါတယ်။ IBC ကေိုပေးကြောင်းအဆိုပါအမြင့်ဆုံးဆု Excellence များအတွက် IBC အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဂုဏ်ပြုသည်နှင့် 2014 ၌ဤဖီဖာတီဗီထံသို့သွားလေ၏။
အဆိုပါ IBC2014 ဆုပေးပွဲအခမ်းအနားကိုတနင်္ဂနွေ 14 စက်တင်ဘာလ 2014 အပေါ်ရာအရပျကိုယူ။ အဆိုပါ IBC2014 ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဆုပေးပွဲအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်, သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး: www.ibc.org/page.cfm/link=6.
Dalet software ကို-based ဖြေရှင်းချက်အပြည့်အဝမီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုများ၏တန်ဖိုးအားပူးတွဲတင်ပြထားပိုပြီးထိထိရောက်ရောက်ပိုမြန်သောအကြောင်းအရာများကိုဖန်တီးစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ဖြန့်ဝေဖို့မီဒီယာအဖွဲ့အစည်းများ enable နှင့်။ Dalet ထုတ်ကုန်ကြောင့်ပါဝါအဆုံးမှအဆုံးသို့ Workflows များအတွက်စွယ်စုံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြေရှင်းချက်ဖွဲ့စည်းရန်, ပေါင်းစပ်သည့်အခါက, သုံးကွဲပြားပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်တည်ဆောက်နေကြသည် သတင်း, အားကစား, အစီအစဉ်ကိုပြင်ဆင်မှု, ထုတ်လုပ်ခြင်း, archive ကိုများနှင့်ရေဒီယို။ တစ်ဦးချင်း, Dalet ပလက်ဖောင်းနှင့်ထုတ်ကုန်တွေဖြစ်တဲ့စားသုံးမိ, QC, ပြင်ဆင်ရန်, transcode နှင့် multiplatform ဖြန့်ဖြူးအဖြစ်အရေးပါမီဒီယာလုပ်ငန်းအသွားအလာလုပ်ဆောင်ချက်များကိုဖြေရှင်းရန် key ကိုစွမ်းရည်နှင့်အတူလျာထားသော applications များဆက်ကပ်။
Dalet ရဲ့ကုန်ထုတ်စွမ်းအား-တိုးမြှင့်လုပ်ငန်းအသွားအလာဖြေရှင်းချက်များအတွက်အခြေခံအုတ်မြစ်, Dalet က Galaxy မျိုးစုံနှင့်ကွဲပြားခြားနားထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဖြန့်ဖြူးရေးစနစ်များကိုဖြတ်ပြီးပိုင်ဆိုင်မှု, metadata ကို, workflow နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များစီမံခန့်ခွဲခြင်းအားဖြင့်အကြောင်းအရာကွင်းဆက် unifies သောလုပ်ငန်းပေးခဲ့သည်ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးမီဒီယာ Workflows တွေအတွက်အံဝင်ခွင်ကျစီမံထားတဲ့, ဒီထူးခြားတဲ့နည်းပညာပလက်ဖောင်းလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုနှင့်စီးပွားရေးမြင်ကွင်းပေးစဉ်ထုတ်လွှင့်နှင့်မီဒီယာပညာရှင်များကုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုးမြှင့်ကူညီပေးသည်။
Dalet AmberFin တစ်ဦး, အရွယ်မှာယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်အပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါလမ်းအတွက်ကြီးမြတ်ဓါတ်ပုံတွေကိုဖြစ်စေအဆောက်အဦဖွင့်, QC နှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်လုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုကျွမ်းကျင်, အပြည့်အဝပေါင်းစည်းစားသုံးမိနှင့်အတူအရည်အသွေးမြင့်, အရွယ်မှာ transcoding ပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါတယ်။ စတူဒီယိုထုတ်လုပ်မှု, Multi-ကင်မရာစားသုံးမိ, အားကစားသစ်ထုတ်လုပ်ရေးနှင့်ပျေါလှငျထုတ်လုပ်မှုသည်ဆန်းသစ်၏တောင်းဆိုလိုအပ်ချက်များကိုဖြေရှင်း Dalet Brio ဗီဒီယိုကဆာဗာကိုပလက်ဖောင်းမြင့်မားသောယုံကြည်စိတ်ချရနှင့်အတူသိပ်သည်းဆနှင့်ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်မှုပေါင်းစပ်။
Dalet စနစ်များတီဗီရာပေါင်းများစွာနှင့်အများပြည်သူထုတ်လွှင့် (ကို ABS-CBN, ဘီဘီစီ, CBC, DR, ပြင်သစ်တီဗီ, RTBF, RFI, ရုရှားယနေ့ RSR & TSR အပါအဝင်ရေဒီယိုအကြောင်းအရာထုတ်လုပ်သူများ, မှာတစ်ဦးချင်းစီအသုံးပြုသူအများအပြားထောင်ပေါင်းများစွာအားဖြင့်ကမ္ဘာတဝှမ်းအသုံးပြုကြသည် RT ကိုမလေးရှား, ဗွီအိုအေ, WDR), စီးပွားဖြစ်ကွန်ရက်နှင့်အော်ပရေတာ (Antena 3, တူးမြောင်း + FOX, eTV, Mediaset, လိမ္မော်ရောင်, Time Warner Cable ကို, Warner Bros. , Sirius XM ရေဒီယို) နှင့်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ (Commons ၏ကနေဒါအောက်လွှတ်တော်, ဥရောပ ကော်မရှင်, တောင်သြစတြေးလျပါလီမန်) ။ Dalet အဆိုပါ NYSE-EURONEXT စတော့အိတ်ချိန်း (Eurolist ကို C) ​​တွင်ကုန်သွယ်ဖြစ်ပါတယ်: ISIN: FR0011026749 Bloomberg သတင်းဌာန DLT: လက်ဗွေ, ရိုက်တာသတင်းဌာန: DALE.PA.
Dalet, အလည်အပတ်ခရီးအပေါ်ပိုမိုသိရှိလိုပါက www.dalet.com
အဆင့်မြင့်မီဒီယာလုပ်ငန်းအသွားအလာအစည်းအရုံး AmberFin အသံလွှင်း BT အားကစား အကြောင်းအရာ Dalet ဒစ်ဂျစ်တယ်ထုတ်လုပ်မှုမိတ်ဖက် ပီပီ IBC ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဆုကို IBC2014 metadata ထုတ်လုပ်မှု timeline ကိုရုပ်မြင်သံကြား Transcoding 2014-09-30
ယခင်: Jamuna ရုပ်မြင်သံကြား AVIWEST ​​DMNG PRO180 ဖြေရှင်းနည်းနှင့်အတူဘင်္ဂလားဒေ့အတွက်တိုက်ရိုက် Newsgathering သို့ပို့ဆောင်
နောက်တစ်ခု: ဖောက်ပြန်သောသူငယ် Animation ရဲ့ Wienerschnitzel များအတွက် Animated ကင်ပိန်းအတွက် Retro သွား